အော်တိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန် WhatsApp ကိုပရိုဂရမ်လုပ်ရန်။ Androidsis
အော်တိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ WhatsApp ကိုပရိုဂရမ်ကိုဘယ်လို။ (တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ)
တစ်ခါတစ်လေမှာမင်းကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ခြင်းအလိုအလျောက်ရန်ပရိုဂရမ် WhatsApp ကို ထို့ကြောင့်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆိုင်းငံ့ခံရဖို့မလိုဘဲစီစဉ်ထားအခြေခံပေါ်မှာသူတို့ကိုပေးပို့နိုင်ပါ။
ဒီတစ်ခါတော့မင်းတို့ကိုသင်ပေးမယ် WhatsApp ပရိုဂရမ်ကိုအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်ငါတင်ပြပြီးအကြံပြုချင်တဲ့ application ဟာ Mark Zuckerberg ကပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ရဲ့သုံးစွဲသူအကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သည့်အပလီကေးရှင်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများပါရှိသော်လည်းအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းသည်နာမကိုတုံ့ပြန်သည် WhatsReminder အတွက် WhatsApp ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကမ်းလှမ်းတာပါ။
1 WhatsApp အတွက် WhatsReminder ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း WhatsApp ကိုပရိုဂရမ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
2 WhatsReminder အတွက် WhatsApp ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ download ရယူပါ
WhatsApp အတွက် WhatsReminder ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း WhatsApp ကိုပရိုဂရမ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
WhatsApp အတွက် WhatsReminder ၏ပန်းတိုင်ကိုယ်နှိုက် မှလွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုမရှိပါ ကျွန်ုပ်တို့ပြောသည့်အချိန်နှင့်နေ့၌ WhatsApp ကိုကျွန်ုပ်တို့မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ရန်အချိန်ဇယားဆွဲပါ.
ကျနော်တို့ရန်ရှိသည်ရသောတစ် ဦး ကအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့လျှောက်လွှာ ၎င်း၏အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့် WhatsApp မှတစ်ဆင့်စီစဉ်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်ရွေးချယ်စရာများစွာကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ.
ထို့ကြောင့် WhatsApp ကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်နှင့်နေ့စွဲသို့အဆက်အသွယ်တစ်ခုသို့ပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နိုင်သည် အခါအားလျော်စွာပေးပို့ဖို့ WhatsApp ကိုအချိန်ဇယားဆွဲ လျှောက်လွှာချိန်ညှိချက်များမှရွေးချယ်သော cadence အရသိရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထပ်တူပြုခြင်းအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ Android ၏သုံးစွဲနိုင်မှုမှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်များပေးသော WhatsApp အကောင့်များနှင့်မလွဲမသွေရှင်းပြရန်မလိုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြောမည်နည်း။ WhatsApp ကိုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖျန်ဖြေခြင်းမရှိဘဲပေးပို့ပါ, လုံးဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အလိုအလျောက်လမ်းအတွက်စတိုင်၏အနည်းငယ် applications များလုပ်နိုင်ပါတယ်။
WhatsReminder အတွက် WhatsApp ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ download ရယူပါ
WA အတွက် WhatsReminder
ရေးသားသူ: Paresh Patil
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အော်တိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ WhatsApp ကိုပရိုဂရမ်ကိုဘယ်လို။ (တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ)
Google Assistant သည် Yoigo နှင့်အဆင်ပြေပါသည်
BestCrypt Explorer သည်ဖိုင်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုစကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသောစည်များတွင်ဝှက်ရန်ခွင့်ပြုသည်